I-Excel iye kuGoogle Earth, kusuka kuzixhumanisi ze-UTM - iGeofumadas
Excel ku-Google Earth, kusukela UTM izixhumanisi
NgoFebhuwari, 2012 Ukulanda, Okufakiwe, -Google Earth / Amamephu
Ake sibone icala:
Ngiye ensimini ukwakha indawo, njengoba kubonisiwe etafuleni elilandelayo futhi ngifuna ukukubona ngeso lengqondo ku-Google Earth, kufaka phakathi izithombe ezimbalwa engizithathile
Ubuhlakani bethempulethi yilokho olulodwa:
Iguqula UTM iqondisaI-Geographical ifomati yesakhiwo, ngoba yilokho okufunwa yi-Google
Ikuvumela ukuba ulungise igama lefayela elikuyo
Vumela igama lokungqimba kwe-kml
Phinda ubhale ifayela ekhona, noma ngabe selivele livele
Ivumela ukusebenzisa amathegi we-html incazelo, njengezithombe, ama-hyperlink, njll.
Isifanekiso sesilungele ukuthi i-Spheroid ikhethwe, siyazi ukuthi ku-Google Earth kumele sikhethe i-WGS84.
Kukholomu yokuqala sifaka idatha iGoogle ezobonisa ngayo Bhala.
Kokubili okulandelayo i-UTM ixhumanisa, iqikelela ukuthi uhlelo lwethu lumiselwe ukusebenzisa ukhefana nephuzu njengehlukanisi yedesimali njengokwahlukanisa izinkulungwane. Ngakho-ke ukuxhumanisa okufana no-599.157,90 akuvunyelwe kufanele kubhalwe njengo-599157.90
Kwikholomu elandelayo sifaka indawo. Ngokuyibeka kulayini wokuqala, ezinye zizoguqulwa. Yize zingaguqulwa ngesandla uma kwenzeka idatha ibikumkhawulo wezindawo ezimbili. Ngokufanayo, i-hemisphere; kulokhu ngisebenzisa idatha evela eBogotá, yingakho ngisebenzisa iZone 18 neNyakatho Nenkabazwe.
Futhi ekugcineni incazelo, yilokho esizokubona uma sicindezela iphuzu ku-Google Earth.
Ungalayisha kanjani lezi zixhumanisi ku-Google Amamephu bese uzilayisha kuma-Google Earth
Isinyathelo 1. Landa isifanekiso sokuphakelwa kwedatha. Ukusebenzisa isibonelo esiye sabonisa ezithombeni ongayenza landa lesi template.
Isinyathelo 2. Layisha isifanekiso. Ngokukhetha ithempulethi nedatha, uhlelo luzoqaphela uma kunedatha engaqinisekisiwe; Phakathi kwalezi ziqinisekiso kuhlanganisa:
Uma amakholomu wokuxhumanisa ayinalutho
Uma izixhumanisi zinemikhakha engeyona inombolo
Uma izingxenye zingekho phakathi kwe-1 ne-60
Uma insimu ye-hemisphere ihlukile kuneNyakatho noma eNingizimu.
Idatha yencazelo isekela okuqukethwe kwe-html, njengaleyo ekhonjiswe kusibonelo efaka ukuboniswa kwesithombe. Isazosekela izinto ezifana nezixhumanisi zemizila eku-Intanethi noma idiski yendawo yekhompyutha, amavidiyo, noma yikuphi okuqukethwe okunothile.
Isinyathelo 3. Bona ngeso lengqondo idatha etafuleni nakumephu.
Ngokushesha idatha ilayishiwe, itafula lizobonisa idatha ye-alphanumeric kanye nebalazwe izindawo zendawo; Njengoba ubona, inqubo yokulayisha ihlanganisa ukuguqulwa kwalezi zixhumanisi zibe yifomethi yezwe njengoba kudingwa yi-Google Maps.
Lapho isithonjana sesikhishiwe, ungaba nokubona ngamaphoyinti abekwe ku-Google Street View bese uzulazula kuwo. Ngokuchofoza kuzithonjana ungabona imininingwane.
Isinyathelo 4. Khipha idatha. Ngokuzenzakalelayo umthwalo wedatha uku-WGS84, njengoba usetshenziswa yi-Google. Kepha lokhu kusebenza kukuvumela ukuthi ushintshele kolunye uhlelo lokudidiyela olubekiwe futhi uvuselele imephu. Njengesibonelo, ngishintshela ku-Clarke 1866 futhi ngibona ukuthi ama-vertices aphinde afakwa ebalazweni.
Lapha ungabona ithempulethi esebenza kuvidiyo.
Isinyathelo 5. Landa imephu ye-Kml usebenzisa insiza ye-gTools.
Ufaka ikhodi yokulanda bese unefayela ongalibuka ku-Google Earth; Uhlelo lokusebenza lukhombisa ukuthi ungayithola kuphi ikhodi yokulanda ongalanda ngayo kuze kube izikhathi ezingama-400, ngaphandle komkhawulo wokuthi zingaki izinto ezingaba khona ekulandweni ngakunye usebenzisa i-gTools API. Imephu ikhombisa nje izixhumanisi ezisuka kuGooogle Earth, ngokubukwa kwemodeli enzinhlangothi ezintathu kwenziwe kwasebenza.
Enye inketho: Guqula izixhumanisi zibe yifayela le-kml usebenzisa i-Excel macro
Lapho idatha yethebhu seyigcwalisiwe, igama lefayela le-kml nekheli lapho lizogcinwa khona liyavela ngakwesokudla. kulokhu kubonakala sengathi C: \_ Umsebenzi 25 X.kml
Emgqeni ongezansi sibhala igama ukuthi ungqimba luzoba nefayela le-kml, kulokhu: Ukuphakamisa Umsebenzi 25 X
Umphumela walokhu: ngokuthinta iphuzu incazelo yekholomu yokugcina ye-Excel ingakhonjiswa.
Okokugcina, uma sesilungile sicindezela inkinobho eluhlaza, futhi ifayela kufanele lenziwe.
Umphumela, lapho uyivula kuGoogle Earth ulandelayo. Bheka igama lesendlalelo, njengoba silibiza kanjalo, bese kuba khona amaphuzu anencazelo yawo; ukubathinta kuphakamisa ukuvezwa kwemininingwane. Uma izinto noma amalebula Zibanzi kakhulu, zingenziwa ngezifiso ku-Google Earth ngokuchofoza ngakwesokudla ezakhiweni zezingqimba nokukhetha.
Indlela yokwengeza isithombe ku-kml
Lokhu kulula, ake sithi emininingwaneni yebhange lezinga ngifuna ukubeka isithombe sephasti ye-cadastre, bese kuseli elihambisana nencazelo engiyibhalayo:
Umngcele wesakhiwo, ibhange lezinga leCadastre
Ngokufanayo, uma ngisekuqaleni ngibizwa ngokuthi i-Photo, ngifuna ukubeka isithombe sesigcawu sendlu, inqubo iyafana.
Uma udinga ukufaka imigqa eminye, yenza ikhophi yezinto ezikhona ukuze zihambe ngefomula.
Asikho isidingo sokwengeza amakholomu, uma wenza, ingayeka ukusebenza.
Kudinga ukuthi wamukele ukukhishwa kwama-macros uma uvula ifayela le-Excel
Uma ikuthumela umlayezo wephutha, kungenzeka ukuthi umkhombandlela we-C: awunayo imvume yokubhala, ungazama enye ifolda efana no-C: \_ abasebenzisi \_ okulandwayo \_ inqobo nje uma ifolda ikhona.
Kusuka lapha ungalanda ifayela le-kml njengoba kufanele.
Ukulanda isifanekiso ku-Excel kudinga umnikelo ongokomfanekiso, ongakwenza ngawo I-paypal noma ikhadi lesikweletu.
Uma ngabe unayo izixhumanisi ze-Geographic zohlobo Latitude, Longitude, futhi ufuna ukuthumela ku-Google Earth, ithempulethi yilokhu.
Kungenzeka ukuthi, uma usebenzisa uhlelo lokusebenza, esinye sezigameko ezilandelayo singavela:
Iphutha le-75 - Indlela yefayela.
Lokhu kwenzeka ngoba indlela echazwe ukuthi ifayela le-kml izosindiswa ayitholakali noma ayikho izimvume zalesi senzo.
Ngokufanelekile, kufanele ubeke indlela kudiski D, enemikhawulo embalwa kune-disk C. Isibonelo:
Amaphuzu aphuma eNorth Pole.
Lokhu kuvame ukukwenzeka, ngoba emafasiteleni ethu, njengoba kuboniswe emfundisweni yesifanekiso ukusebenza, ukumiswa kwesifunda kufanele kusungulwe iphaneli yesifunda:
-Coma, for separator izinkulungwane
-Coma, ngokuhlukanisa uhlu
Ngakho, idatha efana: Amamitha ayizinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu ayisishiyagalombili namashumi ayisishiyagalombili namasentimitha ayishumi nambili kufanele abonakale njenge-1,780.12
Isithombe sibonisa ukuthi lokhu kulungiselelwa kwenziwa kanjani.
Lesi esinye isithombe esibonisa ukucushwa kwipaneli yokulawula.
Uma ushintsho lwenziwa, ifayela lenziwa futhi futhi, amaphuzu azovela lapho ahambisana khona ku-Google Earth.
Uma unombuzo, bhalela i-imeyili yokusekela editor@geofumadas.com. Ihlala ikhombisa inguqulo yamawindi oyisebenzisayo.
Thumela Previous«Langaphambilini Funda i-AutoCAD Ukubuka
Post Next I-AutoCAD 3D emnyango wakho, nge $ 34.99Okulandelayo »
Izimpendulo eziyi-114 ziye ku- "Excel kuGoogle Earth, kusuka ezixhumanisweni ze-UTM"
NgoSeptemba, i-2020 ku
Uma uthenge ithempulethi, bhalela imeyili yokusekela ehlobene ne-imeyili yakho.
Imvamisa le imeyili: umhleli @ geofumadas. com
Thola ithokheni LAPHA virker ikke. Ngabe unakho yini ukukuthola?
Ithokheni LAPHA ayisebenzi. Ngingakutholaphi?
Kwangathi, i-2019 ku
Sawubona, ungabelana ngesicelo sokuhlola noma sokuhlolwa kwesikhashana "i-Excel to Google Earth, kusuka kusixhumanisi se-UTM", ngezinjongo zokufundisa kuphela futhi ngenqubo engikhuthaza uhlelo lwakho lokusebenza. Ngiyabonga
NgoMashi, i-2019 ku
Yiya kuzilungiselelo zesifunda seWindows yakho bese ubeka iphuzu njengendlela yokuhlukanisa amaphuzu wedesimali kanye ne-comma njenge-separator yezinkulungwane.
Uma usenakho ukungabaza ubhalele i-imeyli yokusekela eyafika ngokuthengwa kwesifanekiso.
Kungithatha nami eNyakatho YePole futhi ifu lokukhomba li-Asunción del Paraguay
NgoFebhuwari, i-2019 ku
Inkinga ixazululwe ukwesekwa.
Kwakuyinkinga yokuhambisana nezihumusho ezintsha zehhovisi 365 kanye ne-64 bits.
Noma inkinga ukulungiswa kwesifunda kwesistimu yakho yokusebenza.
Kumele uqinisekise ukuthi kungenalutho olubekiwe, njenge-separaratorator, elingenalutho njengecala lokuhlukanisa uhlu noma njengecala lokuhlukanisa amaphuzu.
Ukuze uthole ukwesekwa kokuthenga imodeli, thumela i-imeyili yokusekela ehambisana nokuthenga.
Isebenzisa i-Ribas Junior uthi:
Landela izincomo zesiza, faka imininingwane bese ubuyisa noma iphutha - I-Microsoft Visual Basic »Iphutha ngesikhathi sokuqalisa« 13 »: Type Incompatíveis.
Agasti, i-2018 ku
Isizathu sokuthi uthumele idatha ku-pole, kungenxa yokuthi kumafasitela akho kufanele wenze lokhu kulungiselelwa:
Iphuzu, njengehlukanisi yezinkulungwane
I-comma, njengesahlukanisi sezinhlawulo
I-comma, njengendlela yokuhlukanisa uhlu.
Uma unokungabaza, sikuthumelele i-imeyili.
Akukwenzi lokho okubalwe kahle, ikuthumelela enkundleni enyakatho, ngiyenzile ngisho nedatha ezayo ngaleyo ndlela futhi ikuthumelela enyakatho yepula, ibonakala ihlaya olikhokha okuthile futhi elingasebenzi, ngithemba ukuthi ukuxazulula le nkinga.
Uma ngingadingi ukubuyiselwa kwemali yami.
Ingabe uqinisekise indlela yefayela yokuphela?
Ngigijimisa uhlelo bese ngithola iphutha le-Run Run time ´75´:
Iphutha le-76 livame ukuhlotshaniswa nefolda okhuluma lapho ifayela lizokwenziwa khona.
Okufanele ukuthi usebenzise umzila esihlalweni D: hhayi C: ngoba kaningi awunawo imvume yokubhala ngqo ku C:
Kungumqondo omuhle ukubuyekeza izilungiselelo zephuzu lesifunda njengokuhlukanisa ama-decimal kanye ne-comma njenge-separator yezinkulungwane.
Noma yikuphi ukungabaza ongitshela khona.
Sawubona, ngisebenzisa i-Excel ye-Mac futhi ngithola inombolo yephutha 76
U-Antônio Felipe Abem Athar uthi:
Amazinga we-Quero Excel we-Google e-Hart ne-X yz
NgoJanuwari, i-2018 ku
ukucushwa onakho kulungile.
Ingabe unayo ezingeni le-Excel noma ukusethwa kwesifunda kwamawindi?
Ukusekela ukusekela, ungayenza kumhleli we-imeyli (at) geofumadas. i-com
UFrancesca Mengozzi uthi:
Siyabonga ngokungithumela isixhumanisi. Manje, noma yini akwenzayo, ungithumela eNyakatho YePole.
Ngabeka u-UTM N kuqala no-E kamuva, bese emuva. Nginezinkulungwane ezihlukaniswe ngama-commas nama-decimals ngamaphuzu.
Izixhumanisi zivela enyakatho yeChile (19 s).
Uthunyelwe eposini, inkinga ukuthi ubhale i-imeyili ngokungalungile,
sithumele e-imeyili efanelekile ebhalile.
Ngikhokhele umkhiqizo kabili futhi angizange ngithole isifanekiso.
Ungayithola yini kimi, sicela?
Inombolo yokuthengiselana i-5SV58331V3337363F
Novemba, i-2017 ku
Sawubona Carolina, sesivele sikuthumele isixhumanisi se-imeyili yakho. Kungenzeka ukuthi uye kugaxekile wakho.
Sawubona, ngiyakutshela ukuthi sengivele ngikukhokhele kepha awuzange unginike ithuba lokulanda. khokha kusuka ku-paypal egameni likaCarolina Trujillo futhi inombolo yokuthola irisidi kwakungu-797849290 × 9052642
NgoMashi, i-2017 ku
Ngivele ngithumele ithempulethi ku-imeyili, ngichaza icala lethu elincane kulo.
Ngiyabonga kakhulu futhi imikhonzo.
Ithempulethi ilungiselwe ukuvala amaphuzu we-500.
Ukuyengeza kumaphuzu amaningi, kuyadingeka ukuguqula ikhodi. Thumela isifanekiso kumhleli @ geofumadas futhi sizosandisa.
Sizama ukwandisa ifomu, kodwa uma uvula ifayela .kml nge-google umhlaba, nje usishiyele elihambisana imigqa yokuqala idatha ishidi lokusebenzela. Singayandisa kanjani ukuletha ivolumu yamaphuzu esiwadingayo? Ingabe kunomkhawulo wamaphoyinti okuzofakwa?
Siyabonga futhi siyabonga kakhulu
Sawubona uJuan Pablo. Siphathe kabi isixhumanisi esiya ku-imeyili yakho, ukuze sizilande. Kungenzeka ukuthi ibingasekho kugaxekile wakho.
Ukwengeza, sibuyisele ukukhokha okuphindwe kabili okwenzile.
Uma unesinye ukungabaza, sitshele
Bangiklaze ngefayela, ngakhokha "umnikelo ongokomfanekiso" kabili futhi angizange ngilithole ifomu.
NgoFebhuwari, i-2017 ku
Iphutha 75 idica umzila osuzithathile akanayo ibhale ukufinyelela, kunokuba ngqo kudiski C, uzame elinye isiqondiso, noma ifolda elincane noma disk E
Iningi elibizayo, okungafani ne-optoão de ponto kanye virgula no painel de controle amafasitela, inkinga iqhubeka.
«Iphutha akukho tempo de execução '75':
U-Erro kusuka ekutholeni ukuya emigwaqweni / ezinqolobaneni ».
Indawo noma ingobo yomlando kml em: c: \_ Umsebenzi we-25 X.kml
Ngicela ungisize ngilungise le nkinga.
Akulungile ukucubungula izixhumanisi.
Noma i-ponto (.) I-virtual (,) isofthiwe ehambisanayo.
I-Tentei ingashintsha ukuhamba emascara, kodwa não deu certo.
I-faço ixazulula kanjani le nkinga ???
Imizila enesihlobo oyenzayo kumafayela, njengesibonelo
ifayela: /// C: /Users/geofumadas/Pictures/005c_got.png
Indlela elula yokuthola imizila, vogle chrome evulekile, futhi ukusuka lapha usebenzisa i- "ctrl + o» bese ubheka ifayela. Ku-url uzobona indlela.
Kuhle futhi futhi,
Siyabonga kakhulu ngosizo, sesivele sinqume ukuthi ukwehluleka, noma kunjalo, umbuzo wethu manje ungabeka kanjani izithombe kumaphuzu akuleli. Yimuphi umgwaqo okufanele siwufake?
Hlola ukuthi ukucushwa kwesifunda kwikhompyutha yakho, ukuthi ukwehlukaniswa kwezinkulungwane kuyinkomba futhi ukucushwa kwezinhlawulo kuyisici.
Uma usabangela izinkinga, bhalela umhleli, uthumele ifayela lakho ngolwazi olufakile.
(umhleli we-geofumadas. com)
Ngenza ukuthengwa isifanekiso Excel uma ihlela ifayela le-KML ekhiqizwa kodwa izixhumanisi efanayo ku-Google Earth ayibonakali kusayithi lakho kusiholela kufaka iphuzu elifanayo (North Pole).
Sisezindaweni esenyakatho yeSpain futhi umqondo wethu ukusebenzisa ithempulethi ukuthola amaphuzu athathwe nezithombe zabo ezifanele.
NgoJuni, i-2016 ku
Ngezinye izikhathi kuya kwifolda yeposi engenamahloni,
Hlola, futhi uma unenkinga ubhalele ku-imeyili ehambisana nokuthengiselana.
Othandekayo, ngithenge nge-Paypal, kodwa angisitholi i-imeyili ngesixhumanisi sokulanda. Isikhathi esingakanani sokulinda?
Sithumele isixhumanisi ngeposi. Noma kunjalo, uhlala ubona ugaxekile, kwesinye isikhathi kuya lapho.
Kwangathi, i-2016 ku
Ngivele ngenze inkokhelo nge-PayPal, kodwa angizange ngithole isixhumanisi sokulanda isifanekiso. Ngiphinde ngiphinde ngibukeze ugaxekile futhi akubonakali nhlobo. Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthola imeyili?
Ngo-Ephreli, i-2016 ku
Sesivele sibuyisele ithempulethi oyithengile kabili. Uma unezinkinga eziningi, sazise.
Sikuphendulile ngeposi. Kwesinye isikhathi kuya kugaxekile, kepha sikudlulisele kusixhumanisi. Uma unezinkinga, sazise.
Futhi ukuqedela ama-ID okuthengiswa okwenziwe nge-PayPal yilokhu:
Sicela, ngithemba ukuthi impendulo esheshayo.
Okwamanje ... ngiyabonga
Mfowethu weGeofumadas.com, ngikhokhile nge-PayPal umkhiqizo "CISHELA KU-GOOGLE EARTH KUSUKELA E-UTM COORDINATES" futhi ngesikhathi sokulanda uhlelo ungithumela ku-PayPal, nokuthi ngephutha futhi i $ 4.99 USD ikhokhisiwe.
Angicabangi ukuthi ukuthola umkhiqizo obusisiwe ngikhokhela cishe u-$ 10.00 USD.
Ngitshele ukuthi ngenzeni ukulanda uhlelo noma ngabe kufanele ngilinde kangakanani uma bengithumelela i-imeyili yami siqu; okufanele ukwenze ukuze uthole imali engaphezulu engayenza ngegama lakho.
Disemba, i-2015 ku
Bheka ugaxekile. Kwesinye isikhathi uya lapho. Uma unezinkinga, bhalela i-imeyili evela ku-invoice.
Ngithenge ithempulethi futhi angizange ngifike ekuthunyelwe, njengoba ngenza kanjalo ukuze bangithumelele, Ngiyabonga.
Hlola igaxekile ye-imeyli yakho.
Kwesinye isikhathi uya lapho. Uma unenkinga, phendula i-imeyili ekhonjiswe kusiqinisekiso sokukhokha.
UCarlos Choir uthi:
Ngivele ngenza ukukhokha futhi ifayela alikafiki.
Okthoba, i-2015 ku
Shintsha indlela lapho ifayela lizogcinwa khona.
Okungcono, akusikho ku-disk C, kodwa ku-disk D, ngoba ukubhala ngokuqondile ku-C ngezinye izikhathi akutholakali.
Nginenkinga nge-hard drive ye-PC futhi kwakudingeka ngiyishintshe. Ngangifuna ukusebenzisa ifomu ukudlulisa i-UTM ku-Google Earth futhi inginika umlayezo olandelayo
Iphutha le-76 livele ngesikhathi sokuqalisa
Ungangisiza yini ngicela?
NgoSeptemba, i-2015 ku
Kusebhokisini lakho. Bheka ukuthi kwesinye isikhathi kuya kugaxekile
UJuan Carlos Vega uthi:
Ngivele ngikhokhele, ngilinde kuphi isifanekiso? ???
NgoJuni, i-2015 ku
Sawubona, José Luis.
Lesi sifanekiso senziwe ukufaka idatha ye-UTM. Izici zingangezwa zibe ngama-degree ama-degree noma ama-degree / imizuzu / imizuzwana.
Yebo, ungakwazi ukwengeza izithombe.
Shintsha uhlobo lwesithonjana ... alukho ekusebenzeni kwesifanekiso samanje.
Ukwenza ngezifiso isifanekiso ngaphansi kwezimo olindele… kubiza ama-US $ 50.
hi g! Ngezinye izikhathi wangisiza ukulayisha amafayela ami ku-google emhlabeni, nginesithakazelo kulesi template esiphezulu futhi ngizimisele ukukhokha imali eceliwe, kodwa ngifuna ukucacisa imibuzo ethile:
I-1-It ingashintshwa ukuze isebenzise amadigri, amaminithi namasekhondi noma amadijithi wedesimali.
I-2-Ngiyakwazi ukuguqula uhlobo lwesithonjana ngokudidiyela.
I-3-Ngingafaka izithombe ngesikhathi esithile.
Kungabiza malini uma lezi zinguquko zenziwe?
Vuselela ikhasi, kufanele ubone isixhumanisi sokuLanda / sokuthenga
Ngingathanda ukuthola le template, ithengiswa noma lapho ngingayithola khona
Disemba, i-2014 ku
ungabonisa ukuthi ukuxhumanisa kuphi ukulayisha, angikwazi ukukuthola kulesi sihloko
NgoSeptemba, i-2014 ku
Sebenzisa isixhumanisi esise-athikili
Uhlelo lokusebenza lubonakala luhle kakhulu. Ngilulanda kanjani?
Ngilanda kanjani ifomu ukuze ngikwazi ukukufakazela?
NgoMashi, i-2014 ku
Ithuluzi elihle kakhulu lokusiza umsebenzi wehhovisi, imikhonzo
NgoJanuwari, i-2014 ku
kubonakala sengathi kuyisicelo esithakazelisayo, kuyodingeka ukuyifakazela
NgoJuni, i-2013 ku
sawubona ubusuku obuhle inkinga yami ukuthi ngiqale ngaphuma lapho ngiyinikeza ukudala i-kml "Iphutha lokususa i-75" bese ngenza lokho abakushoyo ukuthi ngithola "iphutha le-76 utekelezaji" engingakwenza
NgoMashi, i-2013 ku
Sithumele ifayela ukuze libuyekezwe.
Kuze kube manje sekusebenze kahle, kungenzeka ukuthi enye insimu oyethula ngenye indlela.
Ngokuqondile ibahumushela kwi-latitude 32400.000000 kanye ne-longitude -1.000000 ° Isebenzisa izixhumanisi ezifanayo kwizibalo zokuguqula, noma kunjalo, ngibheka ukuthi imayini yasekuqaleni inhle, ngoba ngihlela iphuzu ku-google Earth, ngibeka izixhumanisi zesibali, futhi iyangibeka kahle. Ngiyabonga kakhulu
Noma yini engiyenzayo (ngihlelile konke ukuze izinqumo zihambe nenkathi nezinkulungwane ngamakhoma) zihlala zingiyisa kukhwetha. Ukuphakama engicabanga ukuthi kungilungele, kepha i-latitude yi-0. Ngokuqondile ngifaka le datha ye-UTM ED50 engeyona i-wgs84 ingeyaseNyakatho Spain (Navarra), futhi ngaphelela ngokuphele eGulf of Guinea.
I-akhawunti yami ye-pay pay ixhunywe kwenye i-akhawunti ye-imeyili futhi ngizoyithanda uma ungayithumela kuleli kheli le-imeyli engithumele kulo myalezo. Ngiyabonga kakhulu
Cishe, unenkinga nge-symbol yezinkulungwane.
Zama ukufaka lezo zixhumanisi ezididiyelwe ze-UTM, ngaphandle kwezikhathi noma amakhomithi ukuze ubone ukuthi lokhu kuyinkinga.
Ngemuva kwalokho uya kuzilungiselelo zesifunda somshini wakho bese wenza ushintsho. Uyacelwa ukuthi usebenzise ikhoma njengesihlukanisi esiyinkulungwane nesihlukanisi sohlu; iphoyinti njengesihlukanisi sedesimali.
Ngilenzile ifayili kepha uma ngilibuka emhlabeni lingithumela esigxotsheni se-N.Ngithi kuwe: izixhumanisi ze-UTM engizisebenzisayo zaguqulwa zaba izixhumanisi kubude nobude, kodwa zisebenzisa i-diythi ye-ED50 esikhundleni se-WGS84. Ngabe kufanele ngidlule ngaphambi kufomethi ye-UTM esetshenziswe e-Excel? Noma kunjalo, ngacabanga ukuthi noma ngabe azifani, igebe belingeke libe phezulu kakhulu, ngoba uma ngiqhathanisa nezinye izixhumanisi zalabo engibasebenzisa ne-ED50 nabo e-WGS84 (bavela eSpain), okucashuniwe ngamamitha ambalwa, kepha kumephu Ngicabanga ukuthi akukho ongakubona, noma amalebula akukholamu ethi "amalebula". Noma yimuphi umbono lapho ngiphutha khona? izinyathelo nefomethi yedesimali ivela ilungile (izoni yi-29 no?).
Disemba, i-2012 ku
Ngibhalele ukuguqula kusuka ku-geographic kuya ku-UTM, kepha nginenkinga nefayela lokukhiqiza ifayili lokuya ku-Google uma likhiqiza ifayili kepha wonke amaphuzu asele nge-180grades 0minutes 0.00Seconds North kanye ne-Latitude 74 degrees 0 Amaminithi kanye nemizuzwana engu-0.00 I-West futhi ayikhombisi iphuzu kumephu. Ngiyabonga uma ungangisiza. UGloria Dominguez
Hlola i-imeyili yogaxekile, ngezinye izikhathi isixhumanisi sokulandwa kwesifanekiso siya khona
Sicela ungiqinisekise ukuthi kungani ngingatholanga ithempulethi yokuyilanda kumafayili we-google Earth, ukudlulisa izixhumanisi ezindawo ku-UTM. Ngiyabonga IGEDL
Asikwazanga ngempela ku-Mac IOS.
Ngiyabonga ngokuphendula, ngikwenza engangitshelwe kona. Inkinga yaqhubeka, nokho, ngaphenduka lapho ngashintsha igama elabelwe kufayela le-kml lokuthumela futhi yathuthukisa into. Ukusuka ekusekelweni ngumngane ngiguqule kusuka ku- «\_ SIMV \_ MAPAS.000.000.000.kml» kuya ku- «\_ SIMV \_ MAPS \_ test.kml». Manje ayiyithumeli kufolda eyabelwe ukuthunyelwa kwelinye izwe kodwa ekugcineni ifayili ikhiqiziwe, ikwifolda efanayo lapho ispredishithi sisebenza kahle khona.
Ngithemba ukuthi ungakwazi ukubona iphutha, ngisebenze kahle kumafasitela kodwa manje ngisebenza ku-Mac futhi lapho siya khona, uma unemibuzo engingayithanda. Siyabonga futhi
Zama ukusebenzisa igama nomzila olula, isibonelo:
Qinisekisa ukuthi unelungelo lokubhala kuleso siqondisi, uzama ukwenza ifayela lapho kusuka kusiphequluli se-mac.
Ngizama ukuyisebenzisa ku-Mac, ingitshela uma ngikunikeza ukukhiqiza: "Iphutha 'i-52' livele ngesikhathi sokugijima, igama noma inombolo yefayela engalungile."
Inginika izinketho ezine, owokuqala uvinjelwe, ngingakhetha nje kuphela noma yikuphi kokugcina ezintathu:
I-1 Qhubeka 2 Qeda i-3.Iphephabhuku 4.Help
Ngikhetha ukuPhukisa futhi ngishiye iwindi elithi:
'Khiqiza i-KML Macro
Kufanele uyiguqule ibe yifomethi ye-kml
Ungakwenza lokhu nge-gvSIG noma kunoma iyiphi enye uhlelo lwe-GIS
Ngidinga ukulayisha umdwebo we-dwg we-google emhlabeni, njengoba ngiyayenza, umdwebo yi-axis of the path in izixhumanisi ze-utm
C: / amamephu /
Okusebenziseka kakhulu ukuthi kusukela kusiphequluli se-Inthanethi, funa ikheli ukuze ubone indlela, ngoba uma unegama lendlela enendawo engenalutho enjengokuthi: «amadokhumenti ami», kufanele uyibhale njengoba ivela ku-URL yesiphequluli.
Sawubona ungangisiza ngithola "Iphutha lesikhathi sokusebenza le-75" nginike izibonelo "zemizila" yokudalwa kwefayela le-kml. Isibonelo semibhalo yami noma ekulandweni noma kwi-desktop. Ngiyabonga
Hlola i-imeyli ye-SPAM, ngezinye izikhathi lapho kukhona umyalezo oza nesixhumanisi sokulanda okuqondile.
Ngandlela-thile siyithumele ngqo ku-imeyili yakho.
Ngenze inkokhelo nge-paypal kepha ifayela alizange lilandwe, uma lidinga id. Ngiyithumela ekuthengisweni.
Kwangathi, i-2012 ku
Indlela kuphela esinayo, isebenzisa i-PayPal noma i-debit / ikhadi lesikweletu elihlobene ne-PayPal.
Ngidinga ngokuphuthumayo ukuthengwa kwe-Excel kwesicelo ku-Google Eaarth, kodwa nginayo ikhadi lesikweletu kuphela.
Yini okufanele ngiyenze, uma kukhona othintana nabo ePeru, ukwenza ukudluliselwa kwebhange?
Sicela, ngidinga uhlelo lokusebenza nge-URGENCY.
UJosé Rivera - uLima, PERU.
Ngithumelele ikheli lesithombe ozisebenzisayo ukulihlola futhi ubone ukuthi kwenzekani.
Kwesinye isikhathi kuba ngumbuzo wokuthi umzila awakhiwe kahle. Enye indlela yokubona ukuthi leyo ndlela injani ukuvula ifayili lesithombe kusuka kusiphequluli, uchofoze kwesokudla esithombeni bese ukhetha ukuvula nge ... bese ukhetha isiphequluli; ngakho-ke ubheka umzila ongenhla.
Ngizame ukwengeza isithombe kusuka komzila wendawo kepha awusebenzi, uma ngifaka umusho njengoba ubonisa, isithombe sinezelwa ngokwahlukana futhi hhayi njengengxenye yento yokukhomba. Futhi uma ngizama ukubonisa isithombe kuphela uhlaka luphuma kodwa hhayi isithombe.
Bheka kuthebhu uma ngixhunyiwe.
Uma ungenjalo, ungangibhalela editor@geofumadas.com
futhi senza i-aphoyintimenti.
Sawubona Umhleli, ngidinga ukukhuluma nawe ngesifanekiso othengise ngakho, ungangena yini engxoxweni?
Eqinisweni, okusemqoka ukuyivula ngohlelo lwe-GIS bese uyithumela ku-kml.
Uma kungenakwenzeka, thumela ku-imeyili yami futhi ngizokutshela ukuthi ngingakusiza, ngoba ngiyabona ukuthi yiyiphi indlela amatafula ayenayo.
Umcwaningi wamabhuku akazange aqonde ukuthi usho ukuthini
Ngingalutholaphi usizo lomuntu siqu kumcwaningimabhuku… Ngiludinga ngokushesha usizo lwakho, noma ngabe lukubiza malini, ngiyabonga.
sorry ukuthi usefomethi evelele, amanye amaphuzu we-600 enginayo kakhulu.
Iphuzu lesithakazelo: ama-actán ama-steels
Ububanzi: 20.654443 Longitude: -103.377499
Lokhu yilokhu engifuna ukukuguqula kube ngamaphoyinti wentshisekelo we-google Earth, into ukuthi kunamaphuzu angaphezu kwangu-600 wentshisekelo engiwadingayo ukuwathulula ngefomethi ye-kml? Angazi noma uyachaza yini ...
Sinike isibonelo sendlela idatha yephuzu ngayo, nokuthi yiyiphi indlela efana ngayo.
Sawubona ... ngiyaxolisa ngidinga ukuguqula ifayela eliphelele lamaphoyinti wokuthakazelisa ngezixhumanisi zawo libe yifomethi ye-kml ukuyibona ku-google Earth ... othile angangiqondisa, ngiyabonga.
Ngiyajabula ukuthi ukusebenza.
Mina futhi ngokuqinisekile kwesokudla ungene zakhona kumele kube iphuzu zamadesimali isihlukanisi, le isihlukanisi ukhefana futhi ukhefana izinkulungwane isihlukanisi futhi ukulungele.
Sikulungele, sibonga ngomnikelo!
Ngiyibheke futhi kulungile, ingithumelela e-Indonesia.
Kubonakala sengathi kukhona ukuphikisana phakathi kwamayunithi we-Excel namayunithi ayithunyelwa kuwo.
Ungabona ukuthi kuphaneli yokulawula, izilungiselelo zesifunda. Hlola ukuthi leli phuzu lihlukanisa abahlukumezayo kanye ne-separator comma yezinkulungwane kanye ne-comma futhi ihlukanisa izinhlu.
Ngabhala njengoba babonisa:
792713.85 kusixhumanisi se-X
I-1127836.33 ku-Y iqondanisa
Futhi kukhona iwindi elithi:
'Iphutha' 13 'lenzeke ngesikhathi sokuqalisa.
ukuqedela, ukulungisa noma ukusiza.
Izinhlobo azihambelani »
Kufanele ubhale idatha efomini:
Izame Ngoba ithempulethi kucatshangelwa ukuthi amakhoma ahlukanise izinkulungwane namaphuzu okuhlukanisa amanani Kufanele uyisebenzise ngaleyo ndlela.
Lezi izixhumanisi zami,
futhi uma ngenza inqubo, ngithumele e-Indonesia futhi lezi zixhumanisi zivela e-Bolivarian Republic of Venezuela, noma yiziphi iziphakamiso?
Yonke imibuzo yami iphendulwe .. !!
Iphutha lesikhathi sokuqalisa '75':
Iphutha / Indlela yokufinyelela yefayela
Kwakungenxa yokuthi ngikhawulele ukufinyelela ku-drive C: ukushintsha indlela kuyenza ngaphandle kwenkinga. Ngizozama ukwenza lena ekhiqiza i-polygon.
Ubafaka ngenye indlela nxazonke, bona ukuthi i-oda lakho lingasenyakatho, East (Lat, Long)
ngenkathi kuthempelini ku-oda East East (Long, Lat).
Kufanele ususe ama-commas, ukuze afakwe njengezinombolo.
Ngangivivinya futhi iwela ngempela endaweni yakho, zama futhi ungitshele.
Ngicabanga ukuthi kuzodingeka ngizivuselele ukuze ukuhleleka kwezixhumanisi kuhambisane nesikhathi eside, okuyinto evame ukusetshenziswa kakhulu.
Lapha ngishiya izixhumanisi ezithile ezithathwe ensimini eDominican Republic nemigomo elandelayo:
Lapho ngizama ukuyilayisha bawa eNingizimu Melika.
Siyabonga kusengaphambili .. !!
Ngikisela ukuthi ubuyekeze okulandelayo:
Khumbula ukuthi ama-orthophotos e-Google Earth aduduzekile, ngokuhlukahluka okuhlukile. Ngakho-ke lapho udala izixhumanisi ozaziyo, ngethempulethi, qinisekisa ukuthi yikuphi ukuxhumanisa kweGoogle Earth, ukubona uma kufana nalokho okuthekelile kusuka kuthempulethi ne-Datum WGS84.
Yini ezithakazelisayo ukuqinisekisa ukuthi i-coordination matches, funa ibe nephutha lokubala.
Uma ukuxhumanisa kufana, kepha kususwe esithombeni, kungenzeka ukuthi iphutha livela esithombeni. Noma iyiphi indlela engiphakamisa ngayo ukuthi babike amaphutha abatholayo, njengoba ngakhiqize ithempulethi ukuze ngisebenzise mahhala kepha kudinga ukuthi banginike impendulo ngokubona.
Isinyathelo esilandelayo kungaba ukukhiqiza i-polygon, sizobona kwesinye isihloko.
Ukubeka imizila kusiqondisi sendawo, hlola lesi sihloko
Ucabanga ukuthi ifayela lisesikhundleni C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, khona-ke ikhodi yayizoba:
src = »ifayela: /// C: /Users/User/Downloads/woopra_ios.png»
Kungakanani ukungena endaweni yakho ye-19?
Uma ungangibhalela i-coordination, ukuyiqinisekisa.
Inikeza umbono wokuthi awunawo ilungelo lokubhala ku-directory C:
Zama umzila ngaphakathi kwamadokhumenti omsebenzisi wami.
Uqinisekile ukuthi usebenzisa i-WGS84?
Hlola, Angazi uma uhlelo ezweni lakho lunawo yini amanga.
Ukubhema, ngoba ukubhala ngalezi zinkinga kufanele ubheme ugwayi wensangu ... Hehe.
ngiyabonga ngomnikelo .. EXCELLENT .. !!
(Kungani i-Geofumadas ??)
Ngenza inqubo yokulayisha izithombe kusuka kumhlahlandlela wendawo futhi angikwazi ukuwuphetha ngokwanelisayo, uma ungase ulandele okwengeziwe ngendlela ongayenza ngayo ngale ndlela ngoba isebenza kimi ukulayisha izithombe kusuka kwirekhodi lewebhu.
Ngiphinde ngangena nezixhumanisi eZone 19N futhi imininingwane yawa isuswe ngokuphelele.
Siyabonga inkulungwane .. !!
Mhla ntambama uGabriyeli,
Ohlu lwami lwezixhumanisi ze-UTM, ne-19, yeNyakatho Hemisphere, ikakhulukazi eDominican Republic, liwela phansi endaweni yombili nakwazo zixhumanisi. Ngaphinda le nqubo ngezikhathi eziningana, idatha ehlukene kanye nomphumela wawufana. Siyabonga kusengaphambili ngokuya kokukhathazeka kwami.
Ngizocabangela ngakho, ngicabanga ukuthi kuyoba inguqulo ye-2 yalesi template, njengathi senza lowo othumela amaphuzu namaphoyinti ku-AutoCAD
Ingabe kungenxa yokuthi kumele siqale ukukhiqiza ifayela elingenalutho?
Ngizozama ukuqonda ukuthi ama-macros asebenza kanjani, ngoba kubonakala kimi ukuthi kulokhu, kuzoba lula ukwenza i-polygon enezinto ezifakiwe. Ozithobayo …
Idatha Yesayensi Yesifundo - Funda ngePython, Plotly neLeaflet
Njengamanje kunabaningi abanentshisekelo ekwelapheni idatha enkulu ukuhumusha noma ukwenza izinqumo ezifanele kukho konke ...